Ividiyo: Imfihlo yokweba Imiphumela Yenjini Yokucinga
Imfihlo Yokweba Imiphumela Yenjini Yokucinga
NgoLwesihlanu, January 6, 2012 NgoLwesihlanu, January 6, 2012 Douglas Karr
Namuhla ekuseni ngithumela yethu ukuqeqeshwa kokuthengisa abantu isithombe-skrini… ikhasi 1 lokusesha kwe- Ukuqeqeshwa kokuthengisa kweSandler. Okuhlukile ngemiphumela yamakhasi ukuthi kunomphumela wevidiyo kuwo - wesikhungo sokuqeqesha iCharlotte Sandler. Isihloko sevidiyo nencazelo zenziwe kahle ukuze zikuthole kumiphumela yosesho.
Le vidiyo idonsa ukunakwa okukhulu njengesithombe okuwukuphela kwaso esiboniswe ekhasini, futhi ngiyaqiniseka ukuthi isilinganiso sokuchofoza sihle. Incazelo yevidiyo nayo iqala ngesixhumanisi esibuyela ngqo kusayithi labo lenkampani, futhi, ukusiza ukushayela ukuguqulwa. Inkampani yabo yabazali engabahlanganyeli ayivumeli ukuthi basebenzise noma basebenze kuwebhusayithi yabo, ngakho-ke amandla okubeka amavidiyo angaba yindlela enkulu kunazo zonke yalezi zikhungo zokuqeqesha ukuthola ukunakwa ezinjini zokusesha.
Akuyona i-Youtube kuphela eyi- injini yokusesha enkulu yesibili emhlabeni, ziphinde zibonise imiphumela yevidiyo njengengxenye yemiphumela eminingi yenjini yokusesha kuGoogle. Abantu abaningi bamane abafuni ukufunda… bafuna ukugxumela ngqo kuvidiyo. Ngenxa yalokhu, ividiyo ibiyimfihlo yesikhathi eside yezinkampani zokukhangisa ezingenayo, ikakhulukazi emakhasini anamagama wokusesha ancintisana kakhulu. Lesi sibonelo esingenhla sikhulu… noqeqesho lokuthengisa ngabakwaSandler kuwo wonke amadolobha amakhulu, bonke balwela isikhundla futhi izinkampani eziqeqesha ukuthengisa ezidayisayo nazo ziyayifuna leyo miphumela yokucinga!
Ividiyo ngokushesha iba yingxenye ebalulekile yekhono lenkampani lokwazisa abathengi, izinsizakalo zemakethe nokwandisa ubukhona bewebhu. Ukwakha amandla ezinga le-Youtube kwisoftware yethu ye-SEO kunikeza amakhasimende ethu imininingwane ebalulekile ukuqinisekisa ukuthi ibhizinisi labo noma insizakalo ivela ekhasini lokuqala le-Youtube nakuGoogle. UKrista LaRiviere, uCofounder kanye ne-CEO, Amalebhu we-gShift
Ividiyo ibaluleke kakhulu, empeleni, ukuthi izinkampani ziyayithanda Amalebhu we-gShift kufakiwe Ukulandelela ividiyo ye-Youtube ngqo kuzingxenyekazi zabo zenjini yokusesha:
Amalebhu we-gShift futhi inikeze amaklayenti abo ividiyo ezobasiza ukuthi basebenzise amavidiyo wabo we-Youtube ngezinga elithuthukisiwe:
Isihloko seposi, incazelo kanye namathegi kuyizinto ezisemqoka ekusebenziseni amagama angukhiye ngempumelelo. Zama ukusebenzisa amagama asemqoka njengamagama okuqala kunokuba kube ngamagama aphakathi noma wokugcina kusihloko nencazelo. Uma ucindezela izivakashi ukuba zibuyele kusayithi lakho, sincoma kakhulu ukufaka i-URL njengengxenye yokuqala yencazelo. I-YouTube ikhombisa kuphela umugqa wokuqala wencazelo ngaphandle kokuthi uchofoze ukwandisa, ngakho-ke ukuba nesixhumanisi esivezwe kahle kuzokhiqiza ithrafikhi eningi ibuyele kusayithi lakho.
Abathengisi Abangakwesobunxele Ngakwesobunxele
Mar 31, 2012 ku-3: 13 AM
UDouglas, kuhle uchaze ukubaluleka kwamavidiyo. Kepha ngitshele into eyodwa: Ngabe ngidinga ukulayisha ividiyo yami noma ngingavele ngithathe ividiyo ehlobene ne-YouTube, ngokwesibonelo?
Ngikubuza lokhu ngoba imvamisa, ama-blogger awanazo izinsiza zokuqopha ividiyo nokuyilayisha.